Zithini izibonelelo ze tattoos? | Amadoda aQinisekileyo
Iitatto yile mizobo ebekwe eluswini, yazisa imibala phantsi kwesikhumba. Namhlanje itattoo ikhoyo kubantu abaninzi, iseta umkhwa kwakhona, kodwa ubuzwa kwakhona malunga nokuziqhelanisa kwakhe nezizathu zempilo.
Itattoo ibisenkcubeko eyahlukeneyo kumawaka eminyaka kwaye ayisosizathu sokuba siyeke ukuzibhala, bubuhle, bonyusa ukuzithemba kwaye bunokukhokelela kwizikhumbuzo ezinkulu. Nangona asifanelanga silibale ukuba uninzi lwethu luye lwoyika ukuba ne tattoo.
Nokuba sisoyika ukonakalisa ulusu lwethu, ukudinwa ngumzobo oza kuphuma ngohlobo okanye sicinge ukuba sinokuba nomhlaza wolusu… zezinye zezinto ezisenza sicinge ngokuchaseneyo xa uzoba umzobo.
Xa usenza isigqibo masingenzi mpazamo ngokuzenzela enye yefashoni, kuba siyazi ukuba iya kurekhodwa apho ngonaphakade kwaye iya kukubiza imali eninzi ukuyiphelisa. Sukuyifumana itattoo kunye neqabane lakho, yenye impazamo enkulu, kuba ubudlelwane bunokwaphulwa kwaye imemori ihlala ihleli.
Ngaba ziluncedo nyhani?
Uphononongo lwenziwe ngabaphandi abathathu abavela kwiDyunivesithi yaseAlabama (eUnited States) kwaye kuye kwaqinisekiswa ukuba baluncedo. Umzimba wethu udala ezinye iindlela zokuzikhusela xa kufikwa kumvambo wethu. Enye yeempendulo ezithandayo, nangona unokufumana ezinye izibonelelo:
Ukuphucula amajoni omzimba, nangona kubonakala kungenakwenzeka. Amanqanaba e-immunoglobulin A (antibodies) ayenyuka xa sele senze itattoo kwaye kuphandiwe. Uvavanyo lwenziwe kubantu esele benetattoo kunye nabangabhalwanga, apho kwenziwa umvambo ukubona impendulo yabo. Abantu esele benziwe iitattoo khange babonise ukwehla kwe-immunoglobulin A, ngelixa abantu ababezenza umvambo okokuqala benza. Kwaye kunjalo abo sele besazi ukuba kuyintoni ukunyamezela itattoo bayayazi indlela yokujongana nentlungu kunye nokuqunjelwa, ukugcina ukukhusela kwabo.
Banciphisa uxinzelelo ngokunciphisa amanqanaba e-cortisol. Le hormone inoxanduva lokuvelisa uxinzelelo emzimbeni wethu kwaye ukuba neetatoo ezininzi kunciphisa i-cortisol. Singaqaphela ukuncitshiswa kwentloko okanye imigraines, ukugcina ubunzima bethu bungcono ngakumbi, ukulawula uxinzelelo lwethu okanye uqaphele ukuphuculwa kwememori.
Banceda ukuphucula iziphumo zokugonya kwe-DNA. Ngenye indlela yokufaka isitofu, ngokukhuselekileyo kunye nokunika idosi ezininzi. Inkqubo yayo ibuhlungu kakhulu kunendlela elula yokugonya kwaye nangona ibonakala ingaqhelekanga yindlela yokungena, ngokusebenza ngokukuko kwaye sele ibonakalisiwe. Kule tattoo yeinki ayisetyenziswanga ke akukho ngxaki ekucingeni ukuba inokuba sisigxina.
Bonyusa ukuzithemba, kuyinto entsha kwaye uyathanda ukuyibonisa. Kuyavela ukuba akukho lula ukuthatha isigqibo xa kufikwa kumvambo, kodwa ukuba isigqibo siqinile kuzisa ukuzithemba okukhulu. Kukho abantu abathi, xa befumana itattoo, banamava okutshintsha kwemood yabo. Inkqubo ibintle kakhulu kwaye nakwabo bathe bafumana uhlobo oluthile loxinzelelo ebomini babo.
Ngaba bayakhobokisa? Kuye kwathiwa benza umlutha ngenxa yexabiso le-endorphins esiyikhupha xa sifumana tattoo. Umzimba wethu uphendula nge-endorphins xa besiva iintlungu ukuyinciphisa, esi siphumo sisenza ukuba sikhobokise singaqondanga kweso siphumo. Inaliti egqobhoza ulusu yenza la ntlungu kwaye umzimba uphendula ngee-endorphins ukunciphisa olo luvo lungathandekiyo.
Kubantu abaninzi bubugcisa bokubonakalisa umzimba, bakugqala njengendlela yokuzixabisa ngakumbi ngakumbi. Intsingiselo yeetattoos ayinakuphela kwaye uninzi lwazo sinokuyitolika njengamava, ingcinga okanye inkumbulo efanelekileyo.
Bafihla amabala kunye neempawu. Luhlobo oluhle kakhulu kwabo bafuna ukufihla loo ndawo incinci yobuhle ngomzobo. Kukho nabantu abasebenzisa umzobo we tattoo ukuyifaka ngaphezulu kwenye abangasayithandiyo.
Kukho indawo zokusebenzela esele zibheja ekusayineni abantu ngemizimba yabo eneetattoo. Kubonakala kumangalisa ukuva ukuba namhlanje okuchaseneyo kunokwenzeka kwinto enokuba yeyokukhatywa kwiminyaka eyadlulayo. Ngaba ujonga indlela yokwenza itattoo? Sinamacandelo aliqela esikuxelela wona ukuba ungaqala njani ukwenza elinye I tattoo entle.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neenkqubo zetattoo onako Sifunde apha. Kwiindidi kunye neentlobo zemizobo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba unokufunda uhlobo lwemizobo eyenziweyo ezingalweni, ngasemva o iiTattoos ezincinci kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba. Iitattoo zaseSamoa Zezona zona zibhejelwe ikakhulu ukugubungela iindawo ezinkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Zithini izibonelelo ze tattoos?
Ukuzivocavoca kwesifuba seDumbbell